ခိုင်းမှ လုပ်တယ်ဆိုတာ နွားဗျ
သြစတျေးလျနိုင်ငံမှာ သတိထားမိတာ တစ်ခုရှိတယ်။ အိမ်ဖော် ထားတဲ့ အရာပါ။ သြစတျေးလျတွေ ပိုက်ဆံချမ်းသာတာတောင် အိမ်ဖော်မထားဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ အစိုးရက တရားဥပဒေနဲ့ ပြဌာန်းတားမြစ်ထားတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဟိုတုန်းကတော့ အိမ်ဖော်ဆိုတာက ရှိပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း လူ့အခွင့်အရေးကို ဦးစားပေးလာတာနဲ့အမျှ ဒီကိစ္စလည်း ပျောက်သွားတယ်လို ယူဆမိတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်ဖော်ထားတဲ့ ကိစ္စကိုတော့ ကျနော်မကြိုက်ဘူး။
အိမ်ဖော်ဆိုတာက ကျွန် ပဲ။ ဒီစနစ်ကို အာရှနိုင်ငံတွေမှာ အများဆုံးတွေ့ ရတယ်။ ထိုင်း၊ မလေး၊ စင်္ကာပူ စတဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေဟာ အိမ်ဖော်ထားတာကို အရမ်းသဘောကြတယ်။ အိမ်ဖော်ရှိမှ ခေတ်မှီသလိုပဲ။ စင်္ကာပူက စစ်သားတစ်ယောက် သင်တန်းသွားတဲ့အခါမှာ သူ့ အိမ်ဖော်က သူ့ ရဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကိုလွယ်ပြီး လိုက်ပို့ပေးရတယ်။ ဒီဓာတ်ပုံကို အင်တာနက်မှာ တွေ့ ဘူးတယ်။ မြန်မာပြည်လည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ ပိုက်ဆံလေးရှိတာက နှစ်ပြားတစ်ပဲ အိမ်ဖော်နဲ့ဘာနဲ့။ ဘယ်လောက် အနှိမ်ကျင့်ချင်တဲ့ စိတ်လဲ။
အိမ်ဖော်လုပ်တဲ့ လူတွေက တကယ့်မရှိဆင်းရဲ တဲ့ လူတွေ။ အသက်ငယ်ငယ်လေးတွေများတယ်။ တချို့ ဆိုရင် အိမ်ဖော်ကို ခြေတော်တင်ရတာနဲ့ ဘာနဲ့။ ဘယ်လောက် မိုက်ရိုင်းတဲ့ ဗမာတွေလဲ။ ဘယ်သူမှ အိမ်ဖော်မလုပ်ချင်ကြဘူးလို့ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေအနေက ငတ်တဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နေတော့ မလုပ်ချင်တဲ့ အိမ်ဖော်ကို လုပ်ရတယ်လို့ထင်တယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် အိမ်ဖော်ထားတဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို တားမြစ်စေချင်တယ်။ ဒါက ထမင်းစားကျွန်ခံတဲ့ အလုပ်ပဲ။ ခိုင်းတဲ့ လူတွေကလည်း ခိုင်းကောင်းတော့ ဘာ စောက်သံမှ မထွက်ကြဘူး။
လူ့ အခွင့်အရေးလေးစားလိုက်နာပါတဲ့ဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့ အိမ်မှာ ခင်ဗျားတို့ သတိထားပြီးကြည့်ကြည့်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အိမ်။ နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေရဲ့ အိမ်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ အိမ်။ ဘုန်ကြီးတွေရဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း။ အိမ်ဖော်နဲ့ ခိုင်းစေနဲ့။ ဒါလား ယဉ်ကျေးတဲ့ ဗမာဓလေ့ ထုံးစံ။ ဘာလဲ ယဉ်ကျေးမှု။ နောက်ဆုံးပြောချင်တာက အိမ်ဖော်ထားတဲ့လူတွေမှန်သမျှ ကျွန်သခင်တွေပဲ။
သြစတျေးလျနိုင်ငံကို လာဖို့အတွက် ဒုက္ခသည်တွေ အပြိုင်အဆိုင်လျှောက်ကြတယ်။ ဒုက္ခသည် စခန်းထဲမှာ နေတုန်းက စုတ်ပြတ်သတ်အောင် ဘ၀ကိုနာကျင်နေအောင် နေခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေရှိတယ်။ ပြည်တွင်းက လူတွေလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ သူတို့က တခါတလေ ကျနော့်ကိုမေးတယ်။ သြစတျေးလျမှာ ဘယ်လိုထောက်ပံ့ကြေးပေးလဲတဲ့။ ကျောင်းတက်ရင် ပိုက်ဆံပေးတယ်လို့ကြားတယ်။ ဆေးကုတာ အခမဲ့။ ကျောင်းတက်ရင် အခမဲ့။ ခလေးမွေးရင် အခမဲ့လို့ ကြားတယ်။ ဒါက သူတို့မေးတဲ့ မေးခွန်း။ ထူးခြားတာက သြစတျေးလျရောက်ရင် အလုပ်ကို ဘယ်လိုကျိုးကျိုးစားစား၊ ပညာကို ကျိုးကျိုးစားစား သင်မယ်၊ လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်ကို မကြားရဘူး။
ဘယ်လိုအချောင်စားလို့ရမလဲဆိုတာကိုပဲ သိချင်ကြတယ်။ ဒါက ဘာကိုပြလဲဆိုရင် ဗမာတွေဟာ အတော်လေးကို အချောင်လိုက်ချင်တဲ့စိတ်၊ ပျင်းတဲ့ စိတ်၊ သူများဆီက အလကားရရင် အသားကုန် မျိုချင်တဲ့ စိတ်ရှိတာကို ပြတယ်။ ဒါက အင်မတန်ကို စိတ်ဓာတ်အောက်တန်းကျတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗမာပြည်နဲ့ ဗမာလူမျိုးက ဘယ်နေရာရောက်ရောက် သူများတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အောက်ဆုံးမှာပဲ။ လုပ်စမ်းပါ။ ငါတို့ ကျိုးစားမယ်။ အပင်ပန်းခံမယ်။ အလုပ်လုပ်မယ်။ သူများဆီက ဟာကို မတောင်းစားဘူးကွာ။ ဒီလိုစိတ်မျိုးရှိရမှာပေ့ါ။ ဒါပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ အချောင်ပဲလိုက်ချင်နေတယ်။
သူများရောင်တိုင်း လျှောက်လုပ်တာ ဗမာ
ကျနော် လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်က ကားမောင်းသင်တယ်။ ဒီနေ့အထိ အားတဲ့အချိန်ဆိုရင် သင်တုန်း။ အရင်တုန်းက ကျနော်တို့မြို့ မှာ ကားမောင်းသင်ပေးတဲ့ဗမာဆိုလို့ ကရင် တစ်ယောက်နဲ့ ကျနော်ပဲရှိတယ်။ အခုတော့ လူတွေအတော်များများသင်ကြပီ။ သူများက ကားမောင်းသင်ပြီဟေ့ဆိုရင် သူတို့လည်း လိုက်သင်ကြပီ။ သူများက ဈေးဆိုင်ဖွင့်ပြီဆိုရင် သူတို့လည်း လိုက်ပြီးဖွင့်ကြတယ်။
သူများက လင် တွေအများကြီး ယူပြီဟေ့ဆိုရင် သူတိုလည်း လိုက်ပြီး ယူကြမလားမသိဘူး။ ဘယ်လိုဗမာတွေလည်း မသိဘူး။ ဒါက ဘာကို ပြလဲဆိုတော့ ဗမာတွေဟာ တီထွင် ဖန်တီးတဲ့ အုံးနှောက်မရှိတာကို ပြတယ်။ သူများတွေ ခင်း ပြီးသာ လမ်းကို အချောင်လိုက်ချင်တာကို ပြတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖောက်ထွက် ကျိုးစား၊ စွန့်လွှတ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မရှိတာကို ထပ်ပြီးပြတယ်။ ပြတာ ပြောရင် ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ တုံး လိုက်တဲ့ ဗမာ။
ပြင် ကြ၊ ကိုယ်တိုင်မပြင်ရင် သူများပြင်လိမ့်မယ်
ငတ် ပြတ် စုတ်ပြတ်သတ်နေတုန်းက မျက်နှာကတမျိုး။ နဲနဲကောင်းစားရင် သူတောင်းစားတွေ ဟိုဟာ တောင်တယ်။ နဲနဲလေး အဆင်မပြေနဲ့။ ပြောရင် စောက်ကြွားလုပ်ဖို့လောက်ပဲ ရှိတဲ့ ဗမာ။ ပြည်ပမှာ အလုပ်ထွက်လုပ်ရတဲ့ လူတွေအရမ်းသနားဖို့ကောင်းတယ်။ သူတို့ခင်ဗျာ အိမ်နဲ့ဝေး၊ မိဘနဲ့ဝေးပြီး တခြားနိုင်ငံမှာ ကျွန်ခံရတယ်။ အိပ်ခန်းသေးသေးလေးထဲမှာ လူလေးငါးယောက်စုပြုံနေထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ နှိမ်တာကိုလည်း ခံရသေးတယ်။
ရတဲ့ လစာကို ပြည်တွင်းက မိဘ၊ ဆွေမျိုး၊ သားသမီးတွေ စားဖို့အတွက် ပို့ ပေးရတယ်။ ပြည်တွင်းက လူတွေက ဒါတွေကို နားမလည်သလိုပဲ။ နိုင်ငံခြားမှာနေတိုင်း အဆင်ပြေတာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံခြားမှာ ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ လူ ပို့ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို နှစ်လုံးထီထိုးလိုက်၊ သုံးဖြုန်းချင်သလို သုံး။ လူ အရှေ့ မှာ ကြွား။ သိတ်ပြီး လူ ပါး ၀ သလိုပဲ။ ဒါ့ကြောင့် တခါတလေ ဗမာတွေ အကုန်လုံးကို အငတ်ထားတာပဲ ကောင်းတယ်လို့ တွေးမိတယ်။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, August 02, 2011
ဘယ်လို အချောင်စားလို့ရမလဲ ဆိုတာကိုပဲ သိချင်ကြတယ်။ ဒါက ဘာကိုပြလဲဆိုရင် ဗမာတွေဟာ အတော်လေးကို အချောင်လိုက်ချင်တဲ့စိတ်၊ ပျင်းတဲ့စိတ်၊ သူများဆီက အလကားရရင် အသားကုန် မျိုချင်တဲ့ စိတ်ရှိတာကို ပြတယ်။ ဒါက အင်မတန်ကို စိတ်ဓာတ် အောက်တန်းကျတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗမာပြည်နဲ့ ဗမာလူမျိုးက ဘယ်နေရာရောက်ရောက် သူများတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် အောက်ဆုံးမှာပဲ။ လုပ်စမ်းပါ။ ငါတို့ ကျိုးစားမယ်။ အပင်ပန်းခံမယ်။ အလုပ်လုပ်မယ်။ သူများဆီကဟာကို မတောင်းစားဘူးကွာ။ ဒီလိုစိတ်မျိုးရှိရမှာပေ့ါ။ ဒါပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ အချောင်ပဲလိုက်ချင်နေတယ်။
ဘယ်လိုဗမာတွေလည်း မသိဘူး။ ဒါက ဘာကို ပြလဲဆိုတော့ ဗမာတွေဟာ တီထွင် ဖန်တီးတဲ့ အုံးနှောက်မရှိတာကို ပြတယ်။ သူများတွေ ခင်းပြီးသာ လမ်းကို အချောင်လိုက်ချင်တာကို ပြတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖောက်ထွက် ကျိုးစား၊ စွန့်လွှတ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်မရှိတာကို ထပ်ပြီးပြတယ်။ ပြတာ ပြောရင် ပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ တုံး လိုက်တဲ့ ဗမာ။
Bravo! Ko Phone Kyaw:-) I'd loved it and very much appreciate it as was been difficult to explain to my American friends that what's wrong with our Burmese people and kind of Burmese spirit. But because of I feel so fucking shame on it!